क्रमभङ्ग, धुलिखेल र तरङ्ग- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्रा. अभि सुवेदी
क्रमभङ्ग, धुलिखेल र तरङ्ग
फाल्गुन ७, २०६९ प्रा. अभि सुवेदी
काठमाडौ — जगदीश राणाको उत्तर-आधुनिक विस्फोटमा मैले एक सिर्जनात्मक क्रमभङ्गको तरङ्ग देखेँ ।
नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रको निम्तोमा 'हिजो र आजको नेपाली समाज' विषयमा बोल्न हामी तीनजना म, साहित्यकार अनि समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्र र कीर्तिपुर केन्द्रीय विभागका शिक्षक डम्बर चेमजुङ धुलिखेल लज रिसोर्टको प्राङ्गणमा उनन्तीस माघको बिहानै पुग्यौं । यस संस्थाका मुख्य मानिस र राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल सायद हाम्रै प्रतीक्षामा थिए । चिया खाने क्रममा उनले अघिल्लो दिनको उद्घाटनको कथा सुनाए । उनी निकै खुसी देखिन्थे । उद्घाटन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए ।
हेटौंडामा माघ तेस्रो हप्तामा भएको उनको पार्टीको सातौं महाधिवेशनले फेरि अध्यक्ष छानेका यी प्रचण्डको प्राज्ञिक कर्ममा लागेका मानिसहरूलाई भेटेर दिएको यो पहिलो भाषण थियो । प्राध्यापक बरालले प्रचण्डको राजनीतिक व्यक्तित्वको विषयमा सुनाए । बराल सरले प्रचण्डको व्यक्तित्वको त्यो पक्ष कहिल्यै देखेका थ्ािएनन् । उनले प्रचण्डको शारीरिक भावभङ्गिमा, उनका हात र औंलाहरूको चलाइ अनि उनको फटाफट हिँड्ने गति र मानिसहरूसँग बोल्ने र भेट्ने तरिकालाई लिएर बीपी कोइरालाको अङ्गभाषाको सम्झना भएको कुरा सुनाए । बीपीसँग प्रचण्डको तुलना गरे । उनले भारतका अरु नेताहरूका अङ्गभाषाको प्रसङ्ग पनि ल्याए । मलाई पनि बराल सरले यसरी शरीरको भाषाको कुरा गरेको नौलो लाग्यो ।
रङ्मञ्च र नाटकको मानिस भएको कारणले यस्तो चित्रणमा म अर्थ देख्छु । राजनेताहरूलाई सपना र विचारले चलाउँछ । कहीं पुग्ने तिनका सपना छन् भने ती सजग रहन्छन् । हरिणले कान ठाडा पारेर बीच-बीचमा टाढाबाट केही सङ्गीतमय आवाज सुनेजस्तै कोही-कोही राजनेताहरू आफ्ना सपना र भविताको ध्वनि सुन्छन् भन्ने पढिएको छ । काव्यिक व्याख्या हो । प्राध्यापक बराल विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसका समर्थकमात्र होइन, विद्यार्थी हुँदा एक सक्रिय नेता पनि थिए । तर तिनको लामो प्राज्ञिक जीवन र अध्ययनले तिनलाई स्वतन्त्र हुन सिकाएको छ । बराल सरको यो अवतार उनको पछिल्लो कृति 'नेपाल—नेसन स्टेट इन द विल्डरनेस' -२०१२) मा देख्ािन्छ । केही वर्षदेखि तिनले पत्रपत्रिकामा आफ्ना गहन विचार स्वतन्त्र रूपले लेख्तै आएका छन् । बराल सरले सुनाए, 'प्रचण्डले हिजो बोलेको कुराले म चकित भएँ । तिनले कुनै राजनीतिक दललाई गाली नगरी आफ्नो राजनीतिक अनुभवबारे सुनाए । मैले प्रचण्डलाई यो कुरा भनिदिएँ ।'
एउटा प्राज्ञिक मानिस कुन दलको हुनसक्छ भनेर अड्कल काटिरहनु समय नष्ट गर्नुमात्र हो । परेको बेला लागेको कुरा भन्ने हो । प्राज्ञिक मानिसले राजनेताको खोजी गर्दा निरपेक्ष भएर लाग्नुपर्छ । प्रचण्डले बोलेको बराल सर भन्दै गए— राजनीतिक समाधान विपरीत चिन्ता भएका मानिसहरूको दोभानमा सम्पन्न हुन्छ । उनको र गिरिजाबाबुको बीचमा राजनीतिक भिन्नता थियो । दुई ध्रुव थिए ती । तर त्यही कारणले उनीहरू एक ठाउँमा आएर फरक विचारको द्वन्द्वबाट सम्झौता गर्न बाध्य थिए । उनीहरूले त्यसै गरे । इतिहासमा परिवर्तन आयो । प्रचण्डले भने, विपरीत दलको मानिससँग मात्रै द्वन्द्वको अवस्था हुँदैन । आफ्नै दलभित्र पनि हुन्छ । जहाँनेर त्यस्तो अवस्था हुन्छ, त्यहीं सम्झौता गर्नुपर्ने ऐतिहासिक क्षणको रचना हुन्छ । जुन राजनेताले त्यो बुझेर काम गर्छ, त्यसले मात्र समाधान निकाल्न सक्छ भन्ने तिनको भनाइको औचित्य आयोजक केन्द्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथ्युँलाई पनि लागेको थियो । तिनका काम र विचारसँग पनि म परिचित छु ।
प्रचण्डले भनेको अलग विचारका सम्पर्क विन्दुमा सम्झौता गर्नुपर्छ र त्यस्ता सम्झौता उनले गिरिजाबाबु र आफ्नै कामरेड बाबुराम भट्टराईसँग पनि पटक-पटक गरेको कुरालाई प्रचण्डले भनेको सुनाए, प्राध्यापक बरालले । प्रचण्डको यो द्वन्द्वात्मक चिन्ता व्यवहार र अगाडि जानलाई खोज्नुपर्ने समन्वयबाट जन्मेको हो । विपरीत विचारहरू अलग रहे भने न द्वन्द्व हुन्छ न अग्रगति हुन्छ भन्ने दर्शन तिनले राखे । नेपालको सन्दर्भमा भने त्यसले बीपी कोइरालाको मेलमिलापको दर्शन सम्झाउँछ । बीपीको पार्टीका कतिपय र सर्वसाधारणले उनको मेलमिलापलाई शाह राजासँग गरिने एक कालको सम्झौताको रूपमा मात्र लिए । लाग्छ, अहिले आएर प्रचण्डले आफ्ना अनुभवहरू राखेपछि बीपीको मेलमिलापको दर्शन के थियो भन्न्ो कुरा झन् प्रस्ट भएको छ । प्रचण्डको यो अनुभव र दर्शनले नेपालको अहिलेको राजनीतिक गाँठो खोल्न कति काम कसरी गर्ला, हामी हेछौर्ं । तर त्यस्तो सम्झौताको प्लेटोमा पुग्न अमूक राजनेता वा नेताहरूको व्यक्तित्व र भिजन कारक हुन् । त्यसो हो भने के राजनीति भनेको घटनाको शृङ्खलामात्रै हो र तिनलाई मिलाइबस्नु राजनेताहरूको कर्म हो ? प्रश्न जटिल छ ।
म आफूलाई मनपर्ने इतिहासकार चिन्तक हेइडन ह्वाइटका विचार ल्याउँछु । ती भन्छन्, ऐतिहासिकीले मानिसलाई घटनाका शृङ्खलामा मात्र बाँधेको थियो । यस्ता घटना आकस्मिक हुन्छन् । तर ती घटनाको पछिल्तिर काल्पनिकी र सिर्जना हेर्न सक्नुपर्छ । त्यसरी हेर्नु भनेको काव्य हो । सिर्जना हो । त्यस्तो सिर्जनात्मक पक्ष हेर्नसक्ने राजनेताहरूले ठूला काम गरेका छन् ।
हामीले हिजो र आजका समाजका परिवर्तनका छलफल गर्‍यौं । डम्बर चेमजोङले श्रवण मुकारुङले लेखेको गीतमा जनजाति नाच पर्दामा देखाए । त्यसमा जनजातिले हामीले बनाएको भूमि, अनि हाम्रो रगत-पसिनाले बनेको देश अनि संघर्ष हाम्रो र जित हाम्रो भन्ने भाव थियो । डम्बरले राज्यमा हैकम चलाउने राज्यले गरेका मूल कामहरूको पछिल्तिरको राजनीति देखाए । उनी सबै कुराको जरो राजनीतिलाई देख्छन् । चैतन्यले भने, कोही जाति पनि शुद्ध, एकल हुँदैन । अस्मिता एकल हुँदैन । त्यस्तो शुद्ध जातिको परिकल्पना काल्पनिकीमात्रै हो । पहिचान मिश्रति हुन्छ, किनकि अब 'हाइबि्रडिटी' यथार्थ भइसकेको कारणले एकल जातीय भन्नु यथार्थ होइन भन्ने विचार राखे । कुनै जातिको नाममा लोकतन्त्र हुँदैन, जस्तो बाहुन लोकतन्त्र वा अर्को जातीय लोकतन्त्र भन्नु फजुल कुरा हो, तिनले भने । तिनले समाजको परिवर्तनलाई आर्थिक उत्पादनको आधारमा हेरे । मेरो प्रस्तुति समाज परिवर्तनको विषयमा थियो । मैले हिजो र आजको समाजको परिवर्तन हेर्न नेपाली समाजले चलाएका केही आधारभूत विम्बहरूको प्रयोग गरेंँ ।
दलित र महिलाको विषयमा समाजका चिन्तन खासै अगाडि जान नसकेको कुरा मैले राखेंँ । अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग राणाहरूका दरबारबाट बाहिर गएर हेबरमासले भनेझैं आमवृत्त हुन नसकेको तर पछि आएर त्यो प्रजातान्त्रिक चेतनाको विस्फोटको संवाहक भएको कुरा राखेंँ । मैले इतिहास र भूगोलको पहिलोपटक द्वन्द्व भएको कुरा भने । सहभागी युवाहरू विविध पृष्ठभूमिका भेटिए । ती नयाँ नेपालको संघारमा छन् । मेरो प्रस्तुतिमा तिनले देखाएका तिनका उत्सुकता र प्रश्नले पुलकित
भएँ । एक साँझ तिनीहरूकोे भेलामा शिव रिजाल र म साथीहरूसंँग धुलिखेल गयौं । ती युवायुवती नेपाली गीतका लयमा नाचेको हेरेंँ । धुलिखेल लजको चिसो डाँडोमा सपना आँखाका ढकनीले आधी छोपेर नाचेका तिनका तरङ्गित शरीरहरू मलाई नेपाली समयको प्रवाहजस्तै लागे ।
यो मिश्रति मुडमा एउटा अर्को एउटा अनुभव थपियो । बराल सरका सपना र एकजना चौरासी वर्षका लेखकका विचारमा साम्य हुनखोजेको देखेर चकित भएँ । लेखक जगदीशशमशेर राणाको 'उत्तर-आधुनिक विस्फोट' भन्ने किताब विमोचनको प्रसङ्ग छ । काठमाडौंमा उत्तर-आधुनिकता विषयका छलफलमा जानु मलाई खासै अर्थ राख्तैनन् । तर एकपटक हेरेपछि राणाको अनुरोधमा एकल वक्ताको रूपमा बोल्न गएँ । किताबको पुछारतिर जगदीश राणाले राखेको कुराले हल्लायो । तिनले नेपालको माओवादी आन्दोलन, त्रिसठ्ठी सालको नरसमुद्र सबैको निष्कर्ष निकालेर भनेका छन्, यो अभूतपूर्व शान्त र गतिशील विस्फोट हो । माओवादी युद्धले यो देशका बोल्न नसक्ने, विपन्न मानिसलाई वाचाल बनायो । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले उचित काम गर्दैछन् । ती वार्ता गर्दैछन् । त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । विचलन हो । उनले यो विचारलाई उत्तर-आधुनिक बाहुल्य विस्फोट भनेका छन् । तिनले एकाध हप्ता अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा बीपी कोइराला र प्रचण्डलाई एक ठाउँमा राखेर मानेको कुरा सम्झेंँ । मैले पनि यिनै कुरा अनेकौंपटक लेखेको छु ।
बराल सर र यी अराजक साहित्यकारका विचार मिल्नु संयोग होइन । मैले भने, अहिले नेपाली राजनीति र चिन्ता पछिल्तिर सिर्जनाले सङ्कटको सुन्दर काव्य लेख्तैछ । जाक राँसिएर र जाक डेरिडा फेरि बोल्छन्, प्रजातन्त्र र कविता एकअर्कालाई नभई हुँदैन । अनेकौं विम्बहरूका यात्रा गर्दै, कविताजस्तै उपनिषद, डेरिडा, माक्र्स र संगीतकार स्ट्राभिन्स्की, अनि पहिलो उत्तर-आधुनिक विचार प्रयोग गर्ने 'आर्किटेक्ट' चाल्र्स जेङ्क्स, क्रान्तिले वाचाल बनाएका नेपाली विपन्न नरनारीका विविधतालाई सिर्जनशील शैलीमयी लेखकले तयार पारेको यो किताबले उत्तर- आधुनिकतावादको असरल्लभन्दा नागार्जुनको अर्थपूर्ण दर्शनतिर लगेको कुरा मैले राखें । तर बराल सरको प्रचण्ड व्याख्या, प्रचण्डको पुँजीवादी समाजवाद अनि जगदीश राणाको उत्तर-आधुनिक विस्फोटमा मैले एक सिर्जनात्मक क्रमभङ्गको तरङ्ग देखें ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०६९ ०८:५६
'चार दलीय सहमति गैरसंवैधानिक’
फाल्गुन ६, २०६९ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ — संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले चार दलीय सहमतिमा चुनावी सरकार गठन हुनु गैरसंवैधानिक भएको बताएको छ ।
'हामी चुनाव लड्न तत्पर छौं तर चार दलले गैरदलीय चुनावी सरकार गठन गर्नु गैरसंवैधानिक छ,' पार्टी अध्यक्ष अशोक राईले भने, 'यसलाई प्रमुख चार दलले आफ्नो असफलता प्रदर्शन गर्ने घटनाका रूपमा लिएका छौं ।'
तीनदिने केन्द्रीय समिति बैठकपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त पार्टीले वर्तमान राजनीतिक गतिरोधका मुख्य जिम्मेवार कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलगायत सत्तारूढ गठबन्धन रहेको भन्दै सर्वदलीय सहमति हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
'राष्ट्रपति सबै दलहरूका अभिभावक हुन्,' अध्यक्ष राईले भने, 'देशलाई संवैधानिक रूपमा अघि बढाउन सबै दलसित छलफल गर्नुपर्छ, चार दललाई मात्र सर्वेसर्वा ठान्नु हुन्न ।'
'राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक रूपमा बनेको सरकारद्वारा प्रस्तुत निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश पनि स्वीकृत नगरिएको परिप्रेक्षमा संविधानसभा पुनःस्थापनाको विकल्प नै सबैभन्दा उपयुक्त र संवैधानिक विकल्प हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रधानन्यायधिशको नेतृत्वमा गैरदलीय चुनावी सरकारको सहमति गर्नु लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ ।'
जनमोर्चा र समाजवादी एकता दानबहादुर विश्वकर्मा नेतृत्वको जनमोर्चा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा एकीकरण घोषणा गरिएको हो ।
'जनताको इच्छा र आकांक्षालाई साकार रूप दिन, नेपाली क्रान्ति र त्यसका उपलब्धिहरूको संस्थागत गर्न,' २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति र त्यसको उपलब्धिलाई संविधानसभाको माध्यमबाट संस्थागत गर्न दलहरू असफल भएको उल्लेख गदर्ैै संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संविधानसभाबाटै पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्न प्रतिबद्ध नयाँ वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न एकीकरण भएको घोषणा गर्दछौं ।' दुई पार्टी एकीकरणसँगै संघीय समाजवादी पार्टी र झन्डालाई समाहित भएको जनाइएको छ ।